QuickTime waa ciyaaryahan warbaahinta aasaasiga ah ee kombiyuutarada Mac OS. QuickTime la sameeyey by Apple oo dhan ku samayno noocyada kala duwan ee ujeedooyinka multimedia. Inkasta oo inta badan marka la barbar loo maqli karo filimka, QuickTime Player qaban karo fiican oo dheeraad ah. Waxaa wanaagsan in daawashada filimaanta, dhagaysto audio, riyaaqayaa animation, ama sugi music wanaagsan, QuickTime uu noqonayaa in ay engine ugu weyn ee u qabata daruuriga ah multimedia oo dhan.
Ayaa qaab file movie QuickTime waa qaab gaar ah file in uu leeyahay raad kala cayncayn ah u loading warbaahinta ee kala duwan. QuickTime taageeri karaan MOV qaabka, MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, 3GPP, 3GPP2, AVCHD, AVI, iyo DV. Laakiin waxa aad doonaysid in aad samaysid haddii aad diiwaan video ah adiga oo isticmaaleya isticmaale fiidiyo oo aad rabto in aad u ciyaaro QuickTime? Waxaynu wada ognahay in kaamirada ugu soo saaro files MTS formatted, oo noocan ah qaab aanu ka ciyaaro QuickTime. Xalka deg deg ah waayo, kanu waa in loogu badalo file isticmaalaya Wondeshare Video Converter Ultimate for Mac, laakiin sida aad u samayn? Raac talaabada hagitaan talaabo talaabo hoos ku qoran.
Qeybta 1: MTS Best in Converter Quicktime
Qeybta 2: Free MTS in Converter Quicktime
Qeybta 3: MTS Online in Converter Quicktime
Haddii aad tahay mid ka mid ah dadka ayaa ku dhibtooneysa inay ciyaaraan MTS qaab files leh QuickTime, Wondershare Video Converter Ultimate u Mac waxaa loogu talagalay adiga.
Tallaabada 1 Download & Ku rakib Product ah
Tag, oo soo bixi Wondeshare Video Converter Ultimate for Mac. Dajinta iyo rakibidda waa in la geeyo oo kaliya dhowr daqiiqo.
Tallaabada 2 Daahfurka Barnaamijka iyo Import File
Marka download iyo rakibo waxaa loo sameeyaa, abuurtaan software iyo dajiyaan MTS ku soo gudbin aad rabto in laguu soo leexin. Waxaa jira laba siyaabood oo sidaas loo samayn, marka hore waa adigoo gujinaya button Add File iyo xulashada file ama faylasha gacanta, ama ay kaliya ku hayo folder isha furan oo ayan ku jirin suuqa kala barnaamijka soo jiiday file MTS waxaa si.
Si taas loo sameeyo, guji arrow dropdown ku line ee Qaabka Output ka dibna liiska qaabab kala duwan ka soo muuqan doonaa. Dooro qaab kasta oo lagu taageeri karo QuickTime ciyaaryahan warbaahinta iyo MOV lagu talinayaa.
Ka dib dooranaya qaab wax soo saarka aad file oo aad diyaar u tahay inay u badalo tahay, si fudud ku dhuftay icon loogu badalo ka dhinaca midig ee suuqa kala barnaamijka. Waa in ay qaataan dhowr daqiiqo oo kaliya ilaa bar slide ka buuxsanto oo waxay noqon doontaa 100% diyaar u arkaysid aad QuickTime media player!
Waxaad arki, ciyaaro iyo daawashada aad file MTS ka media player QuickTime aan suuragal aheyn, kaliya raac fudud oo si sahlan loo raac talaabooyinka iyo aad ku fiican tahay inuu tago!
Laakiin waxa hadii aadan awoodin bixinta lacagta sida loogu software video diinta? Waa hagaag, waxaad tahay nasiib badan maxaa yeelay Wondershare Free Video Converter u Mac halkan waxaa loogu talagalay adiga! Haa, gabi ahaanba FREE ah ee qof kasta.
Sida version la siiyo, waxaa aad u sahlan in ay isticmaalaan Converter video sameeyey dadka aawadiis ee dadka isticmaala Mac. Tani waxay la yaab leh video badaley waxay kaa caawin kartaa in diinta video badan oo files audio si fudud oo isku mar ah, aad haatan ka dhigi kartaa faylasha oo dhan socon wixii qalab aad leedahay la daawado fiican oo ku haboon ahaanshaha. Waxa intaa dheer in ujeedooyin ay diinta loo baahan yahay, waxa kale oo ay bixisaa dhisay muuqaalada tafatirka aasaasiga ah sida beerista, falinjeeerka, biirtay, qoqobada, isagoo intaa ku daray in sumaddii biyaha iyo subtitles, iyo wax badan oo dheeraad ah si loo hagaajiyo iyo daawadayaasha aad 'ahaanshaha muuqaal ah.
Waxaa sidoo kale waxa uu ka dhisay ee goobidda iyo download feature aad isticmaali kartaa helo oo soo bixi videos si toos ah uga websites video qaybsiga sida YouTube si aad weli ka daawan kartaa videos xataa aan haysan si ay ku xirmaan internet-ka. By kaliya ku daray URL video ah, dejinta qaab wax soo saarka ay, waxa aad awoodi kartaa in aad nuqul jilicsan u gaar ah video nool aad ka heli kartaa internetka.
Isku day inaad taas ka duwan oo online haddii aad ogaato waxa ku haboon.
Sidee baan ku rakiban kartaa QuickTime Wixii Windows 8?
> Resource > QuickTime > Sida loo rogo ama MTS in QuickTime Qaabka socon